विज्ञान र प्रविधि Archives - Page 8 of9- तितोपाटी
मोवाइल म्यानेजमेन्टमा नेपालले फड्को मार्दै
तितोपाटी - मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि १३ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । झण्डै एक अर्ब लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न लागिएको यो अत्याधुनिक सिस्टमका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणले आशयपत्र मागेको थियो । मोबइलको ब्यापर प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी यो सिस्टम तयार…
मंगलग्रहमा जीवन थियो होला त ?
तितोपाटी - नासाको एक रोभरले मंगलग्रहका चट्टानहरुमा भेटिएका अवशेसहरुलाई हेरेर त्यहाँ प्राचिन कालमा जीवहरु रहेको अनुमान गरेको छ। रोभरले तीन अर्ब बर्ष पहिले देखि चट्टानहरुमा कार्बनका अणुहरु, वायुमण्डलमा मिथेन र मौसम परिवर्तनको संकेतहरु पनि फेला परेको छ। डाटाले गेल क्रेटर भित्र रहेको पानीको झ्यालहरू, रासायनिक भवन ब्लक र ऊर्जा स्रोतहरू सहित…
ओपोले गर्यो ‘समर सेल्फी कन्टेष्ट’को घोषणा
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले ‘समर सेल्फी कन्टेष्ट’को घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना देशभर छरेर रहेका उपभोक्ता लक्षित गर्दै यस सेल्फी कन्टेष्टको घोषणा गरेको हो । समर सेल्फी कन्टेष्टमा ओपोको कुनैपनि स्मार्टफोन मोडल खरिद गर्ने उपभोक्ता सम्मिलित हुन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । प्रतियोगितमा सहभागिता…
तितोपाटी - फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आल्स्ट्रोनले हाइड्रोजनबाट चल्ने रेलको विकास गरेको छ । उक्त रेल बिना आवाज चल्छ । कोराडिया आइलिन्ट नामक उक्त हाइड्रोजन ट्रेनलाई रेल नेटवर्कमा एउटा क्रान्ति नै मानिएको छ । कम्पनीले यसको पहिलो मोडल परीक्षण गर्नुका साथै तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । रेलको इन्धन ट्यांकीलाई १५ मिनेटमै भर्न…
फेसबुकले सुपरफाष्ट वाइफाइ ल्याउँदै
तितोपाटी - फेसबुकले सहरी क्षेत्रमा तीव्र गतिको इन्टरनेट अर्थात सुपरफास्ट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । फेसबुकले ६० गिगाहर्जमा काम गर्ने टेराग्राफ सिष्टम निर्माण गरेको छ । उक्त सिस्टमले सहरी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा वाइफाईको सहयोगले इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ । टेराग्राफ सिस्टम प्रयोग गरी ३ सय देखि ५ सय मिटरको…
तितोपाटी - कुखुरापालन व्यवसाय निकै फस्टाएसँगै कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बने पनि यसबाट निस्कने सुलीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणीय समस्या झेल्दै आएकामा अब नेपालमै सुलीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको विकास भएको छ । सामान्यरुपमा खेतबारीमा मलका रुपमा सुलीलाई प्रयोग गरिए पनि ठूला व्यावसायिक फर्मका लागि यसको व्यवस्थापन ठूलै चुनौतीका रुपमा रहेकामा…
केबल, एन्टिना वा स्याटेलाइट बिनै टिभि च्यानल !
तितोपाटी - अब केबुल, स्याटेलाइट र एन्टेना बिनै आफूलाई मन पर्ने दर्जनौं टेलिभिजन च्यानल हेर्न सकिने भएको छ । एड्भान्स टेलिभिजन सिस्टम्स कमिटी (एटीएससी) ले बनाएको टेलिभिजनमा यो सुविधा उपलब्ध छ । ब्रोडकास्टर्स, टिभी उत्पादनकर्ता र अन्य टेक कम्पनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्था हो, एटीएससी । उसले २५ वर्षअघि परिकल्पना गरेको फिचरयुक्त…
तितोपाटी - साइबर सिक्योरिटी फर्म क्यास्पर्स्कीले एक नयाँ मेलवेयरबारे पत्ता लगाएको छ जसले वाइफाई राउटर्सको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताको डिभाइस नियन्त्रण गर्दछ । ‘रोमिङ म्याटिस’ नामको यो मेलवेयरले वाइफाई राउटरमार्फत प्रयोगकर्तालाई यस्ता वेबसाइटमा पुर्याउँछ जसले उनीहरुको सबै जानकारी चोर्छ । यो मालवेयरले जापान, कोरिया, चीन, बंगलादेशका प्रयोगकर्तालाई प्रभावित पारेको बताइएको छ ।…
पपुवा न्यूगिनीमा एक महिनाका लागि फेसबुक प्रतिवन्ध
तितोपाटी - पपुवा न्यू गिनीले एक महिनाको लागि फेसबुक प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । त्यहाँको सरकारले यो वेबसाइटले देशमा पारेको प्रभावलाई ख्याल गरेर यो कदम चालेको बताएको छ । गिनीको सरकारका सञ्चारमन्त्री स्याम बसिलले यो अवधीमा पोर्नोग्राफी र गलत जानकारी पोष्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरु पहिचान गरिने बताए । उनले आफ्नो देशले एक…
जिमेलमा अाफैं डिलिट हुने मेल कसरी पठाउने ?
तितोपाटी - गुगलले हालै जिमेलमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै विभिन्न फिचर्स थप गरेको छ जसले प्रयोगकर्ताको प्राइभेसीलाई बढावा दिनुका साथै इमेल प्रेषकलाई आफूले पठाउने इमेलमाथि बढी नियन्त्रण प्रदान गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चा तथा विवादमा रहेको फिचर हो, कन्फिडेन्सियल मोड । यो फिचरले इमेल प्रेषकलाई आफ्नो गोपनियता कायम राख्न सहयोग गरेको…